အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နှစ် ၁၀၀အတွင်း ရှားပါး နေအပြည့်ကြတ် (သတင်းဓါတ်ပုံများ)
22 သြဂုတ်၊ 2017
သြဂုတ်လ (၂၁)ရက်နေ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးအတွင်း ရှားရှားပါးပါး လုံးဝနေကြတ်တာကို မြင်တွေ့ကြရပါပြီ။ နေကြတ်တဲ့ ၃ မိနစ်နီးပါး အချိန်အတွင်း သက်ရှိဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲ၊ နေရဲ့အပေါ်ယံအလွှာမှာ လောင်နေတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေတိုင်းတာဖို့စတဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေကို လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက် NASA အကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။
1 This composite image, made from four frames, shows the International Space Station, withacrew of six onboard, as it transits the Sun at roughly five miles per second duringapartial solar eclipse, Aug. 21, 2017 from , Northern Cascades National Park in Washington.
2 A total solar eclipse is seen above Madras, Oregon, Aug. 21, 2017. A total solar eclipse swept acrossanarrow portion of the contiguous United States from Lincoln Beach, Oregon to Charleston, South Carolina.
3 Mike Newchurch, left, professor of atmospheric chemistry at the University of Alabama in Huntsville, and graduate student Paula Tucker prepare to launchaweather balloon to do research during the solar eclipse, on the Orchard Dale historical farm near Hopkinsville, Kentucky, Aug. 21, 2017.
4 From left, Ivanka Trump, daughter of President Donald Trump, first lady Melania Trump, President Donald Trump, and their son Barron Trump view the solar eclipse at the White House in Washington, D.C., Aug. 21, 2017.